Voina · Oktobra, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Oktobra, 2016
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Oktobra, 2016
Mila Ny Vaovao Farany Momba Ny Tondradrano Any Jakarta ? Misy Ny Fampiasa Ho An'Izany.
Azia Atsinanana 26 Oktobra 2016
Manampy ny mponina any Jakarta amin'ny fanatsaràna ny vahaolan'ny governemanta amin'ny tondradrano matetika ilay fampiasan'ny haino aman-jery sosialy ao amin'ilay "labaoratoara velon'ny loza voajanahary".
Karaiba 20 Oktobra 2016
Rehefa nandrisika ny olona "hanampy ny Haisiana, fa tsy ny kapitalistan'ny voina" ny bilaogera taorian'ny nandalovan'ny Rivodoza Matthew, dia niverina nahazo sehatra indray ny tokony ho onitra aloan'i Frantsa.
Mitendry Hira Klasika eo Anivon'ny Toeram-Pako Ho Endri-Panoherana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 17 Oktobra 2016
Nikarakara kaonseritra klasika eo afovoan'ny fako eo am-pidirana ny tanànan'i Tetovo, iray amin'ireo tanàna ao Eoropa tratran'ny fandotoana indrindra, ny mpikatroka ara-tontolo iainana ao an-toerana.
Jamba, Manambady, ary Misara-panambadiana: Tantaran-Jazavavy Telo Ao India Amin'ny Andro Maoderina
Azia Atsimo 13 Oktobra 2016
Manamarika ny Andro Iraisam-pirenena Ho An'ny Zazavavy ny 11 Oktobra, izay manazava ny olana misy fiantraikany eo amin'ny zatovovavy manerana an'izao tontolo izao. Misy tantara vitsivitsy ireto notaterin'ny Video Volunteers, mampiseho ny fomba ataon'ireo ankizivavy ao India rehefa miatrika sy miady amin'ny olana isan-karazany mifandraika amin'ny lahy sy ny vavy.
Firaisankinan'i Pôrtô Rikana, Namiratra ao Anatin'ny Fahatapahan-Jiro Manerana Ny Tangoro-Nosy
Amerika Latina 12 Oktobra 2016
Fisedrana ady sarotra ny fahatapahan-jiro ho an'ny Pôrtôrikana, saingy nampivoaka ihany koa ny tsara indrindra tao amin'ny maro.
Enim-bolana Taorian'ny Fahafatesan-Trondro Maro dia Maro Tao Afovoan'i Vietnam, Manao Fihetsiketsehana Manohitra ny Tsy Fisian'ny Fanampiana Ireo Olona An'arivony
Azia Atsinanana 07 Oktobra 2016
"Fantatray fa tsy hanome rariny ho anay ity fitondrana ity. Tsy misolo tena ny mahasoa ny niharam-boina izy ireo. (Saingy) raha tsy miloa-bava ny olona, tsy misy olona hahatsapa ny fanerena."
Fanampiana Mifangaron'ny Mpitsabo Mpanampy Amin'ny Kirizin'ny Fifindrà_monina
Oseania 01 Oktobra 2016
"Tsapako fa tsy ny rehetra no miasa saina; hoe ny teny ‘mpitsoa-ponenana’ dia takelaka maloto manimba ny maha-izy ny olona."